Mitohy ny fanakanan’i Iran ny tolotra iraisam-pirenena amin’ny fandraràna ny Google Play · Global Voices teny Malagasy
Miteraka olana lehibe amin'ny tsiambaratelon'ny fiainana-manokana ny fitantanan'ny governemanta ny fampiasa (apps).
Voadika ny 23 Novambra 2019 5:11 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, فارسی, Shqip, русский, Français, Español, English
Sary avy amin'ny Small Media.
Tamin'ny 9 Oktobra, nandefa taratasy ofisialy ho an'ireo mpanome tolotra fifandraisan-davitra ny governemanta Iraniana nangataka azy ireo hanakana ny Google Play, ny app store ofisialin'ny Google “haingana araka izay azo atao”.
Nosoniavin'i Javad Javidnia ny taratasy, izay sady MLehiben'ny Fampanoavana Lefitra tompon'andraikitra amin'ny tontolontsibera ao Iran no Sekreteran'ny Komity miandraikitra ny Famaritana ny Raharahan'ny Heloka Bevava (CDICC). Mifanaraka amin'ny paikadin'ny manampahefana hanosehana ireo mpiseran'ny aterineto Iraniana hampiasa ny fampiasa (apps) sy ny mpamatsy tolotra Iraniana ao an-toerana miaraka amin'ny famerana ny fidirana amin'ny tolotra iraisampirenena ity hetsika ity.
Hatramin'ny nanendrena an'i Mohammad-Javad Azari Jahromi ho Minisitry ny Serasera sy ny Teknolojia roa taona lasa izay dia ny famitana ny Tambajotram-Baovao Nasionaly ao amin'ny Firenena (SHOMA) no laharam-pahamehan'ny governemanta . Na dia misy ampahany amin'ity tetikasa ity aza no ilana fanitarana sy ny fanatsarana ny fotodrafitrasan'ny aterineto ao Iran, ny fanondroan-toerana haingana – ary indrindra indrindra, ny fanaparitahana manerana ny firenena – ny votoaty sy ny tolotra nomerika no zavatra ilaina fototra iray hafa .
Raha ny marina, mikendry ny hitarika ireo mpiseran'ny aterineto Iraniana hifindra amin'ireo fampiasa (apps) vokarina ao an-toerana (sy hampiantranoina ao an-toerana) sy ny tolotra an-tserasera ao an-toerana ny politikan'i Jahromi. Noho ny tsy fisian'ny fitaovana hafa vokatr'izany dia mitodika any amin'ireo tolotra ao an-toerana ireo mpisera Iraniana izay mora amin'ny fanaraha-mason'ny governemanta, ny sivana ary ny tsy fahaiza-mitantana ny angondrakitra manokana noho ireo tolotra an-tserasera manerantany. Manamarika manokana an'io fandaharan'asa io ny fanapahan-kevitra hanakana ny fidirana amin'ny Google Play.
Fampiasa fandefasana hafatra ao Iran
An'ny Radio Televizionan'ny Repoblika Islamika ao Iran (IRIB) ny Soroush, fampiasa fandefasan-kafatra ao an-toerana sady fampiasa ho an'ny tambajotra sosialy . Tsy afaka manoratra anarana ny kaontiny Soroush ny Iraniana raha tsy amin'ny karatra SIM Iraniana ihany, Mampiseho fandrahonana ho an'ny fiainana manokan'ny mpisera izany satria tsy maintsy soratana miaraka amin'ny karapanondro sy ny adiresin'ny fonenana ny karatra SIM rehetra any Iran.
Bisphone no tolotra iray hafa manana rohy amin'ny governemanta Iraniana. Nampiseho ny fikarohana fa voatahiry ao amin'ny Orinasan'ny Fifandraisandavitra ao Iran ny angondrakitra Bisphone, izay fantatra fa an'ny Mpiambina Revolisionera ny ampahany.
Na dia eo aza ny fampanantenan'i Jahromi amin'ny fampidirana ireo fitsipika mazava sy feno momba ny fiarovana ny angondrakitra mba hamenoana ny tsy fahatomombanana misy eo amin'ny fiarovana ny fiainana manokana dia mbola tsy tanteraka ny volavolan-dalàna momba ny Fiarovana ny Angondrakitra sy ny Tsiambaratelo izay nambara tamin'ny volana Jolay 2018. Tsy nitovy tamin'ny nataon'ireo olona sangany ara-politika hafa, izay niteraka tsy fitovian-kevitra teo amin'ireo vahoaka – ny kabary nataon'i Jahromi momba ny zo nomerika, nanao fanambarana ho an'ny daholobe, ohatra, ny ministerany fa manohitra ny politikan'ny sivana sy ny fanondroan-toeran'ny angondrakitra – saingy mbola mitohy ny fanerena ny fampiasana ireo fampiasa ao an-toerana ao Iran .
Araka ny hita ny fivoarana haingana eo amin'ny fifandraisan'i Jahromi sy ny Parlemanta Iraniana ary ny fankatoavan'ny governemanta ny politika maro manitsakitsaka ny zo ataon'ny Minisiteran'ny Teknolojia sy ny Serasera dia toa inoana fa nisy ny fifanarahana avy amin'ny mpanao lalàna ho fanohanana ny fandaharan'asan'ny fanondroan-toerana. Mampiahiahy izany fivoarana izany noho ny tsy fisian'ny dingana mangarahara sy mazava momba ny fanapahan-kevitra amin'ny sivana. Voafetra ny fahafahan'ny manampahefana voafidy hanara-maso sy hiditra amin'ny fanapahan-kevitra momba ny sivana lehibe. Tokony hanomboka hiteny ampahibemaso ireo depiote milaza ho manohana ny zon'ny olom-pirenena rehefa misy ny tranga toa izao, ary mitaky tamberin'andraikitra.
Raha fintinina, tokony ho jerena ny baiko farany amin'ny fandrarana ny Google Play noho ny antony fanerena ataon'ny manampahefana Iraniana amin'ny fandrisihana ireo mpisera Iraniana hampiasa ny tolotra sy ny teknolojia ao an-toerana izay tsy ahitana mihitsy ny dingana amin'ny fiarovana ny angondrakitra. manimba ny fiarovana ny fiainana manokan'ny mpisera Iraniana amin'ny fandrarana azy ireo tsy ho afaka hampiasa ny tolotra azo antoka sy azo itokisana manerantany ny politika novolavolain'ny Ministeran'ny Teknolojia sy ny Serasera sy ny Filankevitra Ambony misahana ny Cyberspace, ary napetraky ny Fitsarana.
Tokony manan-jo hisafidy ny fitaovana an-tserasera izay afaka miaro hatrany ny angondrakitr'izy ireo ny mpisera Iraniana. Voarahona ny zon'izy ireo amin'ny fiarovana ny fiainany manokana raha mbola terena hampiasa ny fitaovana solony ao an-toerana ireo mpisera.